Dadyow badan ayaan Halis u Arag Deeymaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dadyow badan ayaan Halis u Arag Deeymaha
La daabacay onsdag 23 maj 2012 kl 13.50
Qaar badan ee ka mid ah dadyowga qaata deeymaha sidii ey hooy ugu iibsan lahaayeen ayaan ka war-heyn khatarta ey deeymuhu leeyihiin, halka sidoo kale ey aad u adag tahay sidii hooy lagu mulkin lahaa iyada oo aan deeyn la qaadan. Waxaa sidoo kale aad u adag in la helo guryo la kireeysto. Qaasatan waxay middaasi caqabad ballaaran ku heeysaa dhallin-yarada, sida ay sheegtay hayadda deeymaha hooyada loo qaato ee maanta la soo bandhigay.
– Dhibaatada arrinkaa la xiriirta ayaa aad u sareeysa, maadaama uu qiimuhuna aad u sareeyo. Ma ahan xaalad sidaa ku socon karta mustaqbalka, sida ay sheegtay Alexandra Leonhard, oo hayadda u qaabilsan saadaalinta.
Guud ahaan qiimaha guryaha dalkan ayaa aad loo qiimeeyaa iyadoona kolka aad deeyn guri ku qaadato oo aad dabadeed iska iibiso aad lacag lumin karto. Middaasina hor-seedi karto inaadan deeyntii bankiga iska bixin karayn.